युनाइटेडमा पोग्बाको प्रभाव !
म्यानचेस्टर (एजेन्सी)– म्यानचेस्टर युनाइटेडका फरवार्ड एलेक्सिस सान्चेजले पछिल्लो एक महिनामा पाउल पोग्बाका कारण टोलीको प्रदर्शनमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् ।
जोसे माउरिन्होको बर्खास्ती पछि टोलीमा आएको परिवर्तनका बारेमा पनि सान्चेज बोलेका छन् ।
माउरिन्होको बर्खास्तगी र कार्यवहाक प्रशिक्षकका रुपमा सोल्सेजरको आगमन पछि पोग्बाले ७ गोल गरिसकेका छन् ।
पोग्बालाई मिडफिल्डमा नेमान्जा माटिच र आन्द्रे हरेराले सहयोग गरिरहेका छन् । माउरिन्हो गएपछि पछिल्लो समयमा फ्रान्सेली पोग्बाको बडी ल्याङ्वेज फरक रहेको बताएका छन् ।
‘उनी युवा छन् तर पनि उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनी टोलीमा विश्वास गर्छन्, ‘सान्चेजले भने, ‘मैले पछिल्लो समय उनी टोलीमा थप प्रतिबद्ध भएको र राम्रो खेलिरहेको पाएको छु । अहिले क्लबको वातावरण पनि उत्कृष्ट छ । ‘
माउरिन्होले छाडेयता ड्रेसिङ रुममा कस्तो परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा सान्चेजले भने, ‘बन्द कोठामा के हुन्छ म कहिल्यै भन्न चाहन्न । मानिसहरु जादुमय ढंगले परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्छन् । तर मलाई त्यसमा विश्वास छैन । म मेहनतमा विश्वास गर्छु । ‘
सान्चेज घरेलु मैदानमा यो साता पेरिस सेन्ट जर्मेनविरुद्ध हुने च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा उत्रने सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ २९, २०७५२०:१३
आज एकै दिन दुई युवक र एक वृद्धाको शव फेला ! अनुसन्धान जारी !